Global Voices teny Malagasy » MENA: Tsy Hijab izany! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Desambra 2018 12:50 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Libanona, Palestina, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Vonjy Voina
Amin'ity Ramadan  ity, dia natomboka ny fanentanana marobe mandrisika ny vehivavy hitafy, na hanitsy ny fomba fitafian'izy ireo hijab . Niteraka resadresaka teo amin'ny bilaogera ny fanentanana roa tahaka izany tao Iran sy Palestina.
Tsy zava-baovao ny fanentanana mamporisika ny vehivavy hiakanjo hijab; roa taona lasa izay, mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Tarek Amr, nitatitra  momba ny fanentanana iray manokana izay toa nahasanganehana ireo bilaogera Ejiptiana.
Nitarika ny fahatezeran'i Nicole ao amin'ny Muslimah Media Watch.ny fanentanana Iraniana, izay manana ny tranonkalany manokana , miaraka amin'ny tsena antserasera. Nanoratra ilay bilaogera hoe:
Ny vehivavy Miozolomana dia voatsikera foana amin'ny fitafiany sy ny endriny. Marina fa miaina ao anatin'ny fotoana mampatahotra isika. Na dia izany aza, betsaka ny vehivavy Miozolomana nahatsapa ho ambany, rehefa mahita ny olona fa ilaina ny manao fanentanana dokambarotra lafo kokoa mba hahazoana antoka fa mahafantatra tsara izay tokony hotafianay izahay. Mba hamantarana ny olana sy hanakorontana bebe kokoa ireo andalana ireo: “Ny tsy fananana haya (henatra/fahamaotinana) na manana fa kely, dia mariky ny fahamaizinantsaina, tsy fihamboana ho mahay izany, fa mariky ny tsi-fahalalàna fa tsy sivilizasiona ” Koa aza manadino, ry rahavavy , fa ny maha Muslimah saro-kenatra dia ilaina mba ho marani-tsaina sy mandroso. Ary tsy afaka manana haya ianao miaraka amin'ny lokomena sy kiraro avo.
Maneho hevitra  ilay bilaogera hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/12/131539/
 tranonkalany manokana: http://www.hijab-poster.ir/
 Nanoratra : http://muslimahmediawatch.org/2010/08/a-woman-without-hijab-is-like-a-chair-with-three-legs/
 naneho : http://muslimahmediawatch.org/2010/08/a-woman-without-hijab-is-like-a-chair-with-three-legs/comment-page-1/#comment-20295
 Maneho hevitra: http://ritachemaly.wordpress.com/2010/08/31/campaign-to-correct-the-veil/